Karti Sare Sare Laba-dariiq oo silsilad Bacrimin Shirkado Mashiinka Burburiyo iyo Warshad | YiZheng
Mashiinka Mashiinka Xudunta Laba-geesoodka ah Burburka Bacriminta waa qalab burburin xirfadle ah oo loogu talagalay mugga ballaaran ee alaabta ceeriin, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa nafaqeynta-bacriminta bio-organic, compost qashinka adag ee dowladda hoose, qashinka cawska miyiga ah, qashinka dabiiciga ah ee warshadaha, xoolaha iyo digada digaagga iyo qalabka kale ee geedi socodka bio-halsano.
Waa maxay Mashiinka Mashiinka Xashiishada ah ee silsilad laba-geesle ah?
Ku Mashiinka Mashiinka Xudunta Laba-geesoodka ah Burburka Bacriminta looma isticmaalo oo kaliya in lagu burburiyo burooyinka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah, laakiin sidoo kale waxaa si weyn loogu isticmaalaa kiimikada, qalabka dhismaha, macdanta iyo warshadaha kale, iyadoo la adeegsanayo iska caabinta xoogga sare ee saxanka silsiladda bide MoCar.
Qaybaha ugu muhiimsan ee silsiladda wax lagu burburiyo oo ay ka mid yihiin silsilad bir ah, silsiladda dhammaadka leh rotor-ka ku xiran dhamaadka kale ee silsiladda ayaa ah silsilad ammaan ah oo madaxa ka sameysan bir. Jeexitaanka silsiladdu waxay leedahay burburiye saameyn ku leh, wareegga xawaaraha sare ee silsiladda saamaynta gob la shiiday.
Inta udhaxeysa 28 ~ 78m / s. Si looga hortago in lagu dhejiyo walxaha isdiidan ee jirka birta ah, jirka oo ay ku dhegan tahay saxan caag ah, waxaa jira albaab si deg deg ah looga furayo jirka, dhaq dhaqaaqa waxaa lagu dhejiyay saldhig ka sameysan bir si loo hubiyo howlgalka xasiloon.
Codsiga Mashiinka Xashiishka Bacriminta ah ee silsilad laba-geesle ah
1. Qashinka Beeraha: caws, cunnooyinka cudbiga ka samaysan, haraaga boqoshaada, haraaga gaaska noolaha iwm.
2. Qashinka Warshadaha: haraaga khalka, haraaga sonkorta, leeska iwm.
3. Digada xoolaha ama Dheecaanka: digada digaaga, digada lo’da, digada faraska, dhoobada bulaacada, dhoobada webiga iwm.
4. Qashinka guriga: qashinka jikada, qashinka cuntada, qashinka maqaayadaha iwm.
5. Ku Mashiinka Mashiinka Xudunta Laba-geesoodka ah Burburka Bacriminta waa ku habboon yahay burburin ee wax ka hor iyo ka dib granulation bacriminta xarunta, ama burburka-mugga weyn ee joogtada ah ee alaabta ceeriin agglomerated.
Astaamaha Mashiinka Burburka Mashiinka Bacriminta Chain Double-axle
(1) Qalabka la jajabiyey waa isku mid waana ganaax.
(2) Qaab dhismeed fudud oo macquul ah oo fudud in la nadiifiyo.
(3) Heerka jaban ee sareeya, keydinta tamarta.
(4) Yar oo ay saameeyeen maaddada qoyaanka,
(5) Qaylada shaqada ka hooseysa 75 decibel (db), wasakhda boodhka.
(6) Ku habboon burburin qalab dhexdhexaad ah oo adag.
Laba-geesood silsilad Bacriminta Mashiinka Mashiinka Muuqaalka Muuqaalka ah
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laba-geesoodka ah Lagu Xulo
Hore: Mashiinka Burburiya Labada Marxaladood
Xiga: Bacriminta Urea Mashiinka Xashiishadda
Hordhac Waa maxay Mashiinka Baadhitaanka Tooska ah? Khadka Tooska ah ee Vibrating Screener (Linear Vibrating Screen) wuxuu u adeegsadaa kicinta mootada gariirka sida isha gariirka si ay maaddada ugu ruxdo shaashadda oo ay ugu sii socoto saf toosan. Maaddadu waxay galeysaa dekedda quudinta ee mashiinka baaritaanka si siman uga soo fe ...